Dzhemayma Ruper: inkanyezi yochungechunge "Lost e Austen"
Romance, fantasy babenza izinto ezihlekisayo English - yezingxenye yochungechunge "Lost e Austen". Zabhalwa iphathwa ukuze indaba umbhali kancane kakhulu. Kodwa abalandeli "Pride and Prejudice" inoveli, kungaqali ecasukile. Ithelevishini ifilimu eyathandwa kakhulu. Inhloko ye ngomculi we indima - Dzhemayma Ruper - isibe inkanyezi yangempela. Isihloko iphatha actress, indlela yakhe yokudala, kanye iphrojekthi edume kakhulu Filmography wakhe.
actress British Dzhemayma Ruper wazalwa Okthoba 24, 1981, eLondon. Unina TV intatheli edume Alison Rupert. Cousin uStefanu Filippovich - umqondisi. Ngakolunye izihlobo actress engekho.
UJemima wayewukuphela kwengane kanye njengomuntu omdala, lapho kuxoxwa, wavuma ukuthi wayevame ukuzizwa ebuntwaneni nesizungu. Kusukela esemncane wayefuna yini ukuba umdlali waseshashalazini, futhi yaba yiminyaka emakhulu asithoba ngqo wathi mayelana kunina. Lokho kubanika, bananela indodakazi isethembiso sika waba manqikanqika, etshela intombazane ukuba silangazelela ikusasa umuntu omdala ophumelelayo.
Umama wayenethemba lokuthi uJemima ube udokotela noma ummeli. Kodwa hhayi umdlali waseshashalazini. Ithemba Alison Rupert, njengoba sazi, asizange sigcwaliseke. Kungani owesifazane lowo mkhakha kwaba ngokungaqondile ahileleke namabhayisikobho, aphathwe njengomuntu nganhlanye maqondana play-oyibamba? Ngaleso sikhathi, Elison Ruper eye yasebenzelana eduze nabalingisi ukwazi ukuthi ngezinye izikhathi kunzima ukuphila.
Nokho, uJemima, ubuciko mesmerizing ngakho umbono wokwenza, yena akazange emuva phansi kusukela umgomo walo. Ngaphezu kwalokho, wathonya unina ukuba amthathe audition for yezingane ifilimu studio.
Kakade eyishumi nambili starlet seziqalile ukusetshenziswa wakhe e ifilimu Higher Umuntu Nempi Willie sika. Ngo-1996, Rupert izinkanyezi ku ochungechungeni TV Famous Five, okuyinto wathola ukuthi kuqokwe abantu eziningana wakhe ngoba imiklomelo ehlonishwayo. Kodwa inkazimulo yangempela kwakuseza.
ukudubula Active-movie akazange akuvimbele ukukhandwa intombazane iziqu honours kusukela ehlonishwayo esikoleni esingesona esikahulumeni, nakuba ngokuvamile kwakudingeka aphuthelwe izifundo. Ngemva kwalokho ngempumelelo ngiya ekholishi, lapho ethola umklomelo esikoleni emkhakheni wezobuciko. Lapho ngineminyaka engu-nesishiyagalolunye Rupert atholwe impahla zayo zokuqala - indlu encane edolobheni elingasenyakatho yeLondon.
Dzhemayma Ruper waziwa e ifilimu emibuthanweni ngemuva kokuba yingxenye yohlelo ukuthwetshulwa movie kaBrian De Palma. "The Black Dahlia" - isikrini lithathelwe imisebenzi James Ellroy. Dzhemayma Ruper wadlala ezifana abadlali abadumile njengoba Rouz Makgouen futhi Scarlett Johansson. Kodwa kwakungegazi indima encane. Inkanyezi wangempela actress British baba ngemva kweminyaka emine. Ngaphambi sikhuluma bhá kinoraboty Heroine kwalesi sihloko, kubalulekile ukuba uhlu amaphrojekthi ebaluleke kakhulu lapho okuye ahlanganyela.
Dzhemayma Ruper ukudlalwa izithombe ezilandelayo:
"Midsomer ukubulawa kwabantu."
"Uthando ezindaweni ezibandayo."
"A Sound Okuduma."
"Isikhathi Your Life.
Ngo-2008, umdlali British kwadingeka elibalulekile kwezokwelapha ifilimu serial "Lost e Austen". Futhi ngonyaka ozayo esihambisana uKelli Bruk ukudlalwa ifilimu uhlobo horror, enesihloko esithi "Ihhotela Caledonia".
"Lost e Austen"
Dzhemayma Ruper isibe sibonga emhlabeni elidume ochungechungeni TV. Le noveli "Pride and Prejudice" wathwebula izikhathi eziningi. Gay Endryus, ukuze ukuhlukanisa ngokwakhe ozakwabo ezidalwe zisuselwa ngesakhiwo odumile lwesigameko esiyingqayizivele.
Umdlali oyinhloko, eyadlalwa uJemima - kwentombazane abavamile okuthiwa u-Amanda. Ngezinye ezokungcebeleka, unesithakazelo ekufundeni, ikakhulukazi imisebenzi Dzheyn Ostin. Kodwa ukuzikhathaza kakhulu ekuthonyweni ikakhulukazi, eduze ngakho kuthatha ukuzwa ozithandayo encwadini uhlamvu yakho, lokuthi ngolunye usuku, Ngeke yokugezela, ithola intombazane ngubani ingubo libonisa ngokucacile ukuthi Kwathi ekude. Okungukuthi - kusukela yekhulu nesishiyagalolunye. isivakashi Okungalindelekile kuyinto Elizabeth Bennet.
Ngemva komhlangano nge Heroine etemibhalo Dzheyn Ostin fan lokusungula kwenzekani ngokuphelele zicatshangwe. Girls ushintshanisiwe. Amanda awe izinsuku Dzheyn Ostin. LoElizabethi kuyinto ngekhulu xxi. Ukuze ufunde ukuthi ungaphila kanjani impilo yesimanje Miss Bennet Hammersmith, izethameli ifunda ochungechungeni yokugcina. Izingxenye ezintathu ifilimu enikelwe ukuhamba Amakhasi Amanda Austin. Le ntombazane akuyona kuphela ukuhlangabezana bese uxhumana nabalingiswa noveli, kodwa yephula imisebenzi indaba. Ngaphezu kwalokho uJemima Rupert, umbukiso adlalwa abadlali ezifana Alex Kingston, Elliot Kauen, Hyu Bonnevill, Tom Rayli, Morven Christie, Gemma Arterton.
Dzhemayma Ruper senzeka nje kuphela njengoba actress ifilimu. Ingxenye eningi isikhathi sakhe lunikezelwe ethiyetha. Esaziwa kakhulu umsebenzi wakhe indima ekwakhiweni Skin wakhe Naked eRoyal National Theatre.
Umlingisikazi ivikela ngokucophelela yobumfihlo yakhe kusukela abezindaba awayiphazamisi ukunakwa, kodwa ngezikhathi ezithile komagazini angaphandle ukushicilela izihloko ezikhuluma zobungqingili wakhe. It njengamanje eyaziwa ukuthi Rupert uhlala umlingisi Tom Missoni, kodwa ebuhlotsheni babo akuyona ambalwa imibono.
Lavrov Andrey - umlingisi ababedlala ochungechungeni "Okulandelayo". Biography empilweni yakho, ama-movie
Ellara Sand senkosikazi Oberyn Martell. Indira Varma e "Game of Thrones"
Gnome ka "iNkosi Izindandatho": uhlamvu inimitable of trilogy Tolkien sika
Uwoyela Hemp - umkhiqizo, umuthi ...
Indlela ukupela igama elithi "ngandlela-thile '?
Aloe juice: yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Umlando yokuvikela umlilo Russian. Russia Day ukuvikelwa umlilo
Fascism eJalimane: umsuka nokubaluleka ngoba impucuko yesimanje
Nezingubo ngezandla zakho.
Accelerators Linear izinhlayiya icala. Njengoba kuyizinhlayiyana accelerators umsebenzi. Kungani kuyizinhlayiyana accelerators?
Lesi sifo pharyngitis, ukwelashwa kanye nokuvimbela